Ngabe umehluko phakathi kokuduma kwezulu, umbani nombani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uyini umehluko phakathi kokuduma kwezulu, umbani nombani
UMonica sanchez | | Izimo zezulu
I-Las izivunguvungu Ziyizinto ezimangazayo zesimo sezulu, hhayi nje kuphela ngenxa yokukhanya okungaletha esibhakabhakeni sasebusuku, kodwa futhi nangenxa yamandla angakholeki anayo imvelo, ekhombisa ubukhona be ukuduma kwezulu, umbani nombani.
Zingaba yingozi kakhulu, ngakho-ke kuyanconywa njalo ukuzibuka usendaweni ephephile, kepha Uyawubona umehluko phakathi kombani nombani? Kuyini ukuduma kwezulu? Ngenkathi zibukeka zifana, empeleni ziyizinhlobo ezihluke kancane. Ngakho-ke, ukukusiza ukuthi ubone okunye nokunye, sizochaza ukuthi bahluke kanjani.
2 Flash of imibani
Umbani ukukhishwa kukagesi okunamandla. Inobude obungaphezulu noma ngaphansi kwamamitha ayi-1500, yize ingafinyelela okuningi kakhulu. Eqinisweni, eyodwa yaqoshwa eTexas ngo-Okthoba 31, 2001 eyayingalingani noma ibe ngaphansi kuka 190km. Ijubane abangafinyelela ngalo emhlabathini nalo liyamangaza: ngo-200.000 km / h.
Akhiqizwa emafwini akhula abheke phezulu abizwa ngokuthi i-cumulonimbus, okuthi uma nje efinyelela endaweni ephakathi nendawo kwe-troposphere ne-stratosphere (ebizwa ngokuthi yi-troppopause), amacala amahle amafu ashiwo ukuheha okungekuhle, ngaleyo ndlela kuveza imisebe. Le yincazelo yesayensi yokuthi umbani wakhiwa kanjani.
Flash of imibani
Umbani ukukhanyisa esikwazi ukukwenza lapho kuba nesiphepho sikagesi. Ngokungafani nombani, umbani awulokothi uthinte umhlabathi.
Futhi ekugcineni sinokuduma, okungelutho ngaphandle kwalokho umsindo uzwakale ngesikhathi sesiphepho ugesi lapho umbani ushisa umoya owudlulela ngaphezu kuka-28.000ºC. Lo moya unwebeka ngejubane elikhulu, ngakho-ke akuthathi isikhathi eside ukuxubana nomoya obandayo emvelweni, okwenza ukwehla okukhulu kwezinga lokushisa, kube nenkontileka.
Siyethemba ukuthi sikuxazulule ukungabaza kwakho nokuthi manje usungakwazi ukuhlukanisa phakathi kombani, umbani nokuduma kwezulu. Futhi khumbula, izivunguvungu ziyizibuko zemvelo ezingakholeki, kepha njalo kufanele uzijabulele ngokucophelela 😉.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uyini umehluko phakathi kokuduma kwezulu, umbani nombani
ULus reberger kusho
I-degree Celsius isilinganiso sejubane? Kusukela nini?
Phendula uLus Reberger
UMonica sanchez kusho
I-degree Celsius isilinganiso sokushisa.
Phendula uMonica Sanchez
Bathola i-Zealand, izwekazi elisha elisePacific Ocean
Ucwaningo luqinisekisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ezimileni nasezilwanyaneni zaseYurophu